ब्याकलिंक निर्माण रणनीतिहरूको लागि स्रोतहरू के हो?
आउनुहोस् हामी लिंक इमारत रणनीतिको परिभाषाको साथ सुरु गरौं. यदि तपाइँ यस शब्दको लागि गुगल हुनुहुन्छ भने, तपाइँलाई रणनीतिहरूको सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाइँले लिङ्क सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, तर तपाइँलाई समग्र लिंक इजाजतपत्र रणनीतिको लागी नेतृत्व गर्नुहुन्न।.
सामान्यतया, यो रणनीतिहरूले अन्य वेब स्रोतहरू तपाइँको साथ लिङ्क गर्न बहुमूल्य सामग्री सिर्जना गर्ने अवधारणाको वर्णन गर्दछ. अर्को अवधारणा जुन लिंक पीढी पनि योगदान गर्न सक्छ - अनलाइन सम्बन्ध निर्माण र साझेदारी साझेदारी; ग्राहकहरूलाई लिंक गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्; तपाईंको समुदाय भित्र साझेदारी गर्नुहोस्; अनलाइन र सामुदायिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिनुहोस्.
यी सबै अवधारणाहरू ब्याकलिंक निर्माण रणनीतिको लागि वैध र बहुमूल्य छन्. यद्यपि, तिनीहरू मात्र हामीले वेब साइटहरू तपाइँको प्रयोगक्षेत्रसँग जोड्न सक्दछन् सम्भावित कारणहरू देखाउँछन्. तिनीहरूले तपाईंको प्रश्नको पूर्ण उत्तर दिन, रणनीतिको आधा मात्र प्रदान गर्दैन.
लिङ्क निर्माण रणनीति उपलब्ध वेब स्रोतहरु मार्फत व्यापार लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागी एक प्रक्रिया हो. लिङ्क निर्माण प्रक्रिया सन्दर्भको रूपमा लिङ्क गर्नुहोस् किनभने तपाईंको अन्तिम लक्ष्य यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा निष्पादनमा निर्भर हुन्छ. तथापि, सही दृष्टिकोण बिना परिणाम प्राप्त गर्न असम्भव छ. अन्यथा, तपाईंले लिङ्कहरू सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको वास्तविक व्यापार लक्ष्यको रूपमा सेवा नगर्न सक्दछ.
यो लेख एसईओ लिङ्क निर्माण रणनीतिहरु को सही दृष्टिकोण मा समर्पित छ. हामी तपाईंको प्राथमिक लिङ्क निर्माण अभियान लक्ष्य कस्तो हुनुपर्छ भनेर शुरू गर्न दिनुहोस्.
कारणले गर्दा तपाईको साइटलाई ब्याकलिंक निर्माणको रणनीति चाहिन्छ
गुणस्तर वेब स्रोतहरू बीचको जडान सिर्जना गर्नुहोस् (1 9)
यो एकदम स्पष्ट छ कि प्रत्येक वेबसाइट यसको दिशा र आकार को बावजूद backlinks को आवश्यकता हो. त्यहाँ इन्टरनेट ढाँचाको आधारभूत भाग छ. यद्यपि, किन हामीलाई बाह्य लिंक चाहिन्छ?
दुई प्राथमिक कारणहरू छन् जुन तपाइँलाई ब्याकलिङ्कको आवश्यकता पर्दछ:
प्राधिकृत अनलाइन समुदायहरू, वेबसाइटहरू र तपाईंको उद्योगमा प्लेटफार्महरूसँग सम्पर्कमा रहन; (1 9)
प्रासंगिक र उच्च भोल्युम खोज सर्तहरूको लागि श्रेणीबद्ध गर्न. (1 9)
Google PageRank एल्गोरिदम द्वारा वेबसाइटहरुको मूल्यांकन गर्दछ. यो Google एल्गोरिदमले अन्य प्राधिकृत स्रोतहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू प्रयोग गर्दछ वेब पेज लोकप्रियता, प्राधिकारी, र प्रासंगिकता निर्धारण गर्न. यो एल्गोरिदमले खोज परिणाम पृष्ठमा वेबसाइट स्थितिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछ र Google आँखामा वेब स्रोतको प्रतिष्ठा बढाउँछ.
लक्षित यातायात प्राप्त गर्नुहोस् (1 9)
भवन. तपाईंले प्रत्येक ब्याकलिङ्क बाहिरको लक्ष्यलाई मार्गदर्शन गर्न आवश्यक छ. अन्यथा, यो अभियान र तपाईंले यो प्रयास गर्नु बेकार हुनेछ. त्यसोभए, तपाईलाई एक प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि तपाईलाई कुन उद्देश्यको लिङ्क चाहिन्छ? यस प्रश्नको सबैभन्दा सामान्य र उचित जवाफ यातायात प्राप्त हुँदैछ. ट्राफिक भनेको तपाईंको संभावित साइटमा अधिक सम्भावित ग्राहकहरू क्लिक गर्नुहुनेछ र सम्भवतः ग्राहकहरूलाई भुक्तानीमा बदल्नुहोस्. तपाईंको लक्ष्य परिभाषित एक अवसर अनुसन्धानको साथ सुरु गर्नु पर्छ. तपाईले आफ्नो स्थानमा अवस्थित अवस्थित अवस्थित र कसरी फाइदा लिन सक्नु हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ.
तपाईंको वर्तमान साइट प्रदर्शन को विश्लेषण, वेब स्रोत जो तपाईंको लागि उपलब्ध छ, र यसलाई सुधार गर्न को लागि एक योजना बनाएँ. त्यस गरेर तपाईंले आफ्नो लिंक निर्माण रणनीति विकास गर्न सक्षम हुनुहुनेछ Source .